Ezinye izinqumo zonompempe ku-ABC zifuqwa umswane wembabala - PressReader
Ezinye izinqumo zonompempe ku-ABC zifuqwa umswane wembabala
Lokhu kuyawubula­la lo mdlalo omuhle futhi kwenza ukuthi lingabonak­ali ikhono eligcwele emaqenjini adlala kulesi sigaba
2021-04-23 - NGUSABELO MAPHUMULO
“Lapha ku-ABC Mostepe League ungakwenza konke kahle, kodwa ngeke uye ndawo. Ngisho ungathatha abadlali abadlala esigabeni esikhulu, ngeke banqobe ngebhola labo elihle. Ukuze unqobe kule ligi kumele ube nemali.”
Lawa ngamazwi ashiwo omunye wababaqeqe­shi engimhloni­phayo ngokukhiqi­za abadlali abancane. Wawasho ngesikhath­i ebuzwa ngamalungi­selelo omdlalo weqembu aliqeqesha­yo nelinye adlala kulesi sigaba.
Okunye akubalula wathi: “Ukunqoba umdlalo kulesi sigaba ukuthi umdlali we-12 okungunomp­empe abe ngakuwena ngoba uyena okwenza unqobe.”
Ngamafuphi le nkulumo ihumusha isisho esithi; “Imali impande yesono”.
Nami ngike ngathatha isikhathi ngayibuka imidlalo ye-ABC Motsepe League, bona onompempe bahluleka ngisho nawukufihl­a ukuthi basuke benikezwe inkece ngaphambi komdlalo.
Ngesizini edlule ngafika kuqala enkundleni okwakudlal­wa kuyo, iqembu elalivakas­hile lafika kuqala. Engakuqaph­ela ukuthi abadlali babegqoke imifaniswa­no yeqembu nabaqeqesh­i nabo bagqoka izinto ezifanayo. Ngabe senginaka laba ababili ababegqoke izimpahla zabo nabo bephethe izikhwama. Bahamba bayohlala bodwa, kwafika owesithath­u emva kwesikhath­i ngabe sengibona ukuthi onompempe laba.
Nebala kwakuyibo ngathi ngenhliziy­o; “Ngizoke ngibone!” Hhayi ngempela ngabona into engingakaz­e ngiyibone. Onompempe barobha isiZulu, bathatha ibhola ngaphandle kwebhokisi balibeka ngaphakath­i ebhokisini benzelela iqembu elivakashi­le.
Ngenhlanhl­a yami onompempe abaningi ngiyabazi ngaphandle kwenkundla. Iningi labo akukho lapho elibambe khona amatoho, ukudlalisa iyona ndlela abakwazi ukubeke ngayo isinkwa etafuleni.
Kusho ukuthi uma kuqhamuka imali eqenjini elithize bavele basho ukuthi ngibonwa yini. Kuphinde kungishiye nombuzo wokuthi impilo yabo abayisabel­i yini.
Akekho umuntu ongasuka neqembu lapha eThekwini aye kodlala eMsinga, afike axhoshwe unompempe kalula kanjalo. Uma abadlali bengathath­a isinqumo sokuthi bayamshaya engenza njani njengoba isikhathi esiningi bengekho abaqaphi ezinkundle­ni?.
Omana lapho ngikutshel­e, nabantu abayazi ukusuka nokuhlala indaba yaku-ABC Motsepe bayakutshe­la ukuthi ithi iqala isizini lisuke laziwa iqembu “eliphushwa­yo” ukuthi kube yilo elinqoba iligi, kusho ukuthi lisuke likhokhe kahle.
Akuyona i-ABC Motsepe yaKwaZuluN­atal kuphela enale nkinga yonke indawo ikhona, ngikhuluma nje abanye babadlali engibaziyo abadlala eLimpopo bakhala esifanayo bathi baxhoshwa kubuka wonke umuntu.
Okubuhlung­u ukuthi abaphathi bamaqembu basebenza kanzima kumele baholele abadlali, bajike bacindezel­we onompempe. Ukuboza konompempe kuligi yeDStv Premiershi­p kuqala lapha phansi.
Ingakho begqoza kanje onompempe abasezinge­ni eliphezulu ingoba iningi labo lifuna ukukhokhel­wa nokuyinto engeyinhle neze.
Muva nje ngithe ngifika kweminye imidlalo ngezwa kuthiwa unompempe othize ulaliswe ehhotela elinye lamaqembu ukuze ezolenzele­la. Nebala lo mkhoshosho wabanjwa kwaphoqele­ka ukuthi kudlalise abanye onompempe.
Ngaphandle kwezigamek­o nezinqumo ezenziwa ngonompemp­e kodwa ibhola liyadlalwa kulesi sigaba.
Uma ngingathol­a umsebenzi wokuba inhloli yabadlali eqenjini elithize, ngingahlez­i ngibuya nokhilimu wabadlali.
Kulaba badlali ngikhuluma ngabangena­wo amagama, obonayo ukuthi ukube iqiniso likhona ngabe badlala kuDStv Premiershi­p noma kuGladAfri­ca Championsh­ip.
Ngike ngixakeke iqembu elidlala kuDStv Premiershi­p limemezela umdlali wangaphand­le njengomdla­li walo omusha. Uthi yabona akabozeli ukuthi akube kuhle, ngisho ngithi kungani la maqembu engabheki abadlali emazingeni aphansi.
Kuthathwe umdlali waseZambia oneminyaka engama-28 ezodlalela iqembu lakuleli, ingabe kuthathwa oneminyaka engama-23 akhuliswe eqenjini.
Ngiyanxusa ukuthi abaqeqeshi bakuGladAf­rica Championsh­ip nakuDStv Premiershi­p bathathe isikhathi sabo bayobheka abadlali ku-ABC Motsepe League bangajahi ukuyobabhe­ka uma sekudlalwa imidlalo yokuhlunga.
Ngokubhala lokhu angiqondil­e ukuhlambal­aza i-ABC Motsepe kodwa ngibhala ngoba ngibona indlela okwenziwa ngayo ilibulala ibhola elihle.
Ngifisa engathi wonke amaqembu, angaqhubek­a nokulandel­a imiyalelo kaHulumeni ukuthi imidlalo idlalwe ngaphandle kwabalande­li ukuze kungeke kwenzeke le nto eyenzekile yokumiswa kwemidlalo.
Isithombe: BackpagePi­x Okwenziwa onompempe ku-ABC Motsepe League kugqiba ikhono la laba badlali